PCB Ukukhiqiza - iGolden Triangle PCB & Technologies Co., Ltd
PCB Ochwepheshe ukunikeza PCB eshibhile nenani esincane esingaba 1 ucezu njengoba eliphezulu 5,000 izicucu. Ngaphezu kwalokho, PCB yethu Abaklami uzobheka zonke design amaphutha okungenzeka. Le sevisi ayikwazi ukutholwa okungenani izindlu PCB bumbela. Futhi, silandela esiqine ngempela sokuvikela imininingwane PCB manufacturingworkflow ukuqinisekisa izinga okusezingeni eliphezulu Hambayo ukulethwa. IGolden Triangle PCB amakhasimende zivela ezihlukahlukene enkulu izimboni kanye izingxenye zebhizinisi, ezifana Semiconductor, ibhizinisi Computing, zokuxhumana kanye nezokuxhumana, izimakethe engenantambo, wezokwelapha nezinto eziphilayo, ezimbonini kanye izinhlelo obekiwe, isitoreji inethiwekhi, electronics yezimoto, amathoyizi digital, amathuluzi laboratory, njll Yingakho ungathembela PCBAmanufacturing futhi PCB inhlangano amasevisi wethu. Njengoba lapha, sibeka INGXENYE of amacala ethu ikhasimende wenzele inkomba yakho. Singenza kunawe ucabange. Ngokuvamile, amakhasimende ethu emhlabeni wonke nemibono elandelayo amasevisi ethu: impendulo esheshayo, intengo ezingeni ezinengqondo, phezulu ikhasimende ngombono, ukuzinikela izinga.
IGolden Triangle PCB etshaliwe angaphezu kwezigidi ezingu-10 USD ifektri izindawo, kuhlanganise PCB futhi PCBA inhlangano Equipments (Acid yethusi Through-imbobo Plating, CNC Drilling, PCB Etching Machine, PCB Milling Machine, Surface Mount Machine, ukugelelza umshini, Automated Optical Ukuhlolwa (Aoi) , Wave nokunamathisela ngomthofu) futhi uhlelo yesayensi zokuphatha, okuyothi PCB futhi PCB inhlangano nezidingo zakho kungaba ligcwaliseke high ngokulandela namazinga omhlaba.
usayizi Omncinyane sokuprakthiza ka 0.1mm (~ 4mil)
1 kuya 36 izingqimba
Ngesandla Esiqinile (standard FR4), Flex, Aluminium wasekela.
FR4 *, Rogers, Duriod, Polyimide, CEM1,3, njll
PCB Fabrication ukujiya ukuqala at 8mil ngoba Ngesandla Esiqinile kanye 0.2mm I-Flex.
0.4 ounce ukuba 4 ounce zethusi
Trace Ubuncane / Isikhala ka 3mil.
Kuphela zihlanganisa; ukucwiliswa Igolide, isiliva, Tin, Lead HASL mahhala futhi osp.
IBhodi sekugcineni imibala; Green, Blue, Black, Yellow, Red, emhlophe.
Sikhetha A + ibanga copperplate ukuqinisekisa ukusebenza esitebeleni (FR-4 jikelele) ka PCB bumbela. Phakathi PCBA yokukhiqiza inqubo, ithusi othomathikhi Plating imigqa ephezulu ijubane imishini imishini (brand: TMAX) ukwenza ukunemba kanye kwezidingo okusheshayo yibhange. Zonke ephrintiwe wesifunda ibhodi ngeke itholwe othomathikhi ezindizayo Uphenyo imishini eziphambili (noma ukuhlola uzimele) emazingeni okwalandela ukuze uqiniseke PCB ngamunye Kulungile avela ezifundeni ezingu-kwangaphakathi esheyiphini ngaphandle. Nge esigabeni sokuqala PCB design, isikhathi uhlale kubalulekile kakhulu. esheshayo-phenduka lwethu PCB inhlangano prototyping, ECO (Ubunginiyela ushintsho oda) kanye BGA reballing / rework amasevisi kuletha isikhathi sakho phambili nge ukwazisa kakhulu, kungekho ivolumu ndaba oda (isikhathi esincane esingaba kunye). amahora 20 PCB isampula inkonzo yethu express kakade ibilokhu sokuvikela impilo ngoba omkhulu eziningi amaqembu design umkhiqizo ebhekene zokukhokha esiqinile. unjiniyela wethu izolandela esiqinile futhi elicwengiweyo PCBA ukuhamba komsebenzi ukwenza inqubo PCB yokukhiqiza kanye inhlangano PCB. PCBA amabhodi ethu kabanzi bakhonza amakhasimende ezihlukahlukene izimboni, ezifana imoto, yezokwelapha & ezempilo, ikhadi uhlelo, futhi umthengi electronic. Ngokuvamile, sigcwalisa namazinga ISO yokuphatha esezingeni IPC-A-610E lonke izigaba izinto ezingenayo, wokunyathelisa kwesikrini, SMT, Aoi, ipqc, cwilisa futhi PCBA test. Ngokuvamile, PCB yakho prototype kungenziwa kahle wakhonza yithi. Njengoba sithola isixazululo sakho umkhiqizo yahlelwa, yonke inqubo okwalandela uzobe kulawulwa esiqinile PDCA ukuphathwa ukuqhutshwa komsebenzi wethu. Onjiniyela bethu ozinikele ngeke ukuxhumana ngesikhathi esifanele nawe futhi ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ngaphezu kwalokho, yethu PCBA global yokukhiqiza amakhono kunganciphisa izindleko zakho ngendlela eyayingakaze icatshangwe futhi ngaphandle kokuhlupheka. Siyoba wakho omkhulu PCB nomkhiqizi futhi PCB inhlangano umlingani.
(Ukuze izithombe ngaphezulu sicela uchofoze lapha)
PCB Ukukhiqiza Quality Control
Sikhetha phezulu abahlinzeki ishidi ukuqinisekisa ukusebenza esitebeleni (jikelele FR-4). Phakathi senqubo yokukhiqiza, ithusi othomathikhi Plating imigqa ephezulu ijubane imishini imishini (brand: TMAX) ukwenza ukunemba kanye kwezidingo okusheshayo yibhange. Zonke ephrintiwe wesifunda ibhodi ngeke itholwe othomathikhi ezindizayo Uphenyo imishini eziphambili (noma ukuhlola uzimele) emazingeni okwalandela ukuze uqiniseke PCB ngamunye Kulungile avela ezifundeni ezingu-kwangaphakathi esheyiphini ngaphandle.
Abahlukahlukene PCB Ukukhiqiza
Sitshale angaphezu kwezigidi ezingu-10 USD ku PCB Equipments kuhlanganise electroplate imigqa, imishini imishini, uphenyo ngendiza, umbhalo screener njll Zonke lezi ngokunikezela wena amandla nyangazonke 15,000 square metres PCB yokukhiqiza, okuyinto kusebenza oda elincane-medium enkulu yebhizinisi . Ukuze kuhlangatshezwane ezihlukahlukene esigcawini okufunwa kithi, senza out ezahlukene yokukhiqiza izixazululo ezilandelayo PCB izinhlobo. Ngale ndlela, singakwazi ijahe nezidingo zamakhasimende ekwandiseni ngamasevisi ethu nezimo.
Nezimo ephrintiwe wesifunda yokukhiqiza HDI PCB yokukhiqiza Aluminium PCB yokukhiqiza
Ngesandla Esiqinile flex PCB yokukhiqiza Carbon inki PCB yokukhiqiza Blind wangcwatshwa nge PCB yokukhiqiza
ithusi Heavy PCB yokukhiqiza Impedance PCB yokukhiqiza Shisa e ibhodi PCB yokukhiqiza
Mil-Spec PCB yokukhiqiza Izithuthi PCB yokukhiqiza Uxhumano lwenethiwekhi PCB yokukhiqiza
Backplane PCB yokukhiqiza Ukuhola khulula PCB yokukhiqiza izindleko okuphansi PCB yokukhiqiza
4 Layer PCB yokukhiqiza 6 Layer PCB yokukhiqiza 8 Layer PCB yokukhiqiza
Uma usuqede inqubo PCB yokukhiqiza, manje sekuyisikhathi ukulungiselela izinto ezingenayo ngokuvumelana uhlu BOM bese uqale up PCB inhlangano isigaba noma uphinde uhlole umklamo PCB. Futhi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, ungabuyekeza ngaphezulu amasevisi wethu.